Tiger Woods mpiangaly “golf” Notoloran’i Trump ny mariboninahitra ambony indrindra
BAREA nihintsana tamin’ny JIOI Nametra-pialana i Maitre Rôrô
Niaiky Rakotondrabe Romuald na Rôrô, mpanazatra ny Barea JIOI, fa anisan’ny tompon’andraikitra ny tenany matoa tsy tafita amin’ny manasa-dalana ny ekipam-pirenena Malagasy mandray anjara amin’ny lalaon’ny nosy atsy Maorisy.
Malagasy miatrika ny Lalaon’ny nosy Nangoron’entana ny Barea, namiratra ny mpibata fonjamby
Tsy ampy niakaran’ny Barea Malagasy amin’ny dingany manasa-dalana ny vokatra 1-1 azony tamin’ny Club M Maorisiana tao amin’ny kianja New George V ao Curepipe omaly alatsinainy 22 jolay 2019.
Anicet, Metanire, Bapasy Anisan’ny mpilalao ankafizin’ny Afrikanina
Rehefa mifarana toy izao ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN dia manomboka mipoitra avokoa ireo karazana tombana momba izany na avy amin’ireo mpikarakara io na avy amin’ny mpankafy.
Kitra – ekipam-pirenena 2021 Mety ho mpanafika kokoa
Ny teknika fiarovan-tena na hoe “système de jeu défensif” tamin’ny ankapobeny no nampiharin’ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra, Nicolas Dupuis,
Barean’i Madagasikara Amboara sisa tsy azo
Tao anatin’ireo fihaonana miisa 5 natrehin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra nandritry ny tompondakan’i Afrika nifarana ny zoma teo iny dia in-4 azon’ny Malagasy hatrany ny amboaran’ny mpilalao mendrika.
Kitra lalaon'ny nosy Hifampitady amin’i Maorisy ny Barea
Tamin’ny sabotsy 20 jolay teo no niditra an-tsehatra voalohany tany Maorisy ny Barea Malagasy miatrika ny lalaon’ny nosy 2019.
Lalaon’ny Nosy Atsy Maorisy Medaly volamena 9 no efa azontsika
Mitana ny laharana faha-3 vonjimaika i Madagasikara amin’izao fotoana izao eo amin’ny Lalaon’ny Nosy tanterahina atsy amin’ny Nosy Maorisy.
Nosaloran’ny filoha Amerikanina Donald Trump ny “Médaille de la liberté » tao amin’ny Maison Blanche i Tiger Woods mpiangaly ny taranja « golf »,
telo herinandro taorian’ny nibatany ny fandresena tsy nampino azony, ka nibatany ny amboaran’ny “Masters d’Augusta”. Io “Médaille de la liberté” io no mariboninahitra ambony indrindra azo homena ny sivily any Etazonia. "Ny fahombiazanao nisongadina teo amin’ny tontolon’ny golf, ny fandresenao na eo aza ny fahasahiranana ara-batana, ny fahavononana tsy voahozongozona handresy, handresy, handresy ... ireo toetra ireo dia manamafy sy taratry ny toe-tsaina Amerikanina", hoy i Trump. "Zava-dehibe tsy manam-paharoa ho ahy izao", hoy i Woods namaly, ary nisaotra ireo izay nanohana azy hatrany na tamin’ny tsara na tamin’ny ratsy. Faha-15 amin’ny amboara lehibe azon’i Tiger Woods tao anatin’ny 11 taona iny Masters d’Augusta iny, ary tao anatin’izay dia nisedra fandidiana in’efatra tao amin’ny lamosina, olana ara-panambadiana noho ny fanitsakitsahana ara-tokantrano. Hindrahindraina ho anisan’ny olona malaza indrindra eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena ity Amerikanina mpiangaly “golf” fanta-daza ity. Any ivelany, homen-boninahitra mendrika azy ny olona manandratra ny lazan’ny fireneny....